अभिभावक- कोपिला - कान्तिपुर समाचार
मनोज पूर्वी नेपालको एक गाउँमा जन्मिएका थिए  । उनी अहिले सहरमा बस्छन्  ।
उच्च शिक्षा लिन सहर पसेका उनले मालिनीसँग बिहे गरेर यतै घरजम गरे । मनोज म्यानपावरदेखि लिएर धेरैतिर काम गर्छन् । मालिनी प्राइभेट अफिसमा काम गर्छिन् । उनीहरूको एउटा छोरा छन्– मौसम । मौसम अहिले ६ वर्षका भए । उनी सहरको महँगो बोर्डिङमा १ कक्षामा पढ्छन् । उनलाई मनोज र मालिनीले घरमै ट्युसन पढाउने शिक्षक व्यवस्था गरिदिएका छन् । मौसमलाई पढ्न खासै मन लाग्दैन । बाबुआमा व्यस्त भएकाले मौसमले अभिभावकको मायाको न्यानोपन महसुस गर्न सक्दैनन् । कहिलेकाहीँ मौसमलाई नरमाइलो लाग्छ, किन कि उनी आफ्ना अभिभावकसँग रमाउन चाहन्छन्् ।
एक दिन आमाबुबाको छेउमा गएर मौसम लुटपुटिन्छन् । दुवैले झर्को मान्छन् । उनी निराश हुन्छन् । भन्छन्, ‘बाबा मामु मसँग खेल्नु न । घुम्न लानु न । पहाडको मामाघर र हाम्रो घरमा लानु न ।’ व्यस्तताले गर्दा आमाबुबाले मौसमको कुरालाई वास्तै गरेनन् । मनोजलाई रिस उठ्छ । छोरासँग बोल्न उनीहरूलाई फुर्सद छैन् । बल्लबल्ल आमाले जवाफ दिनुहुन्छ, ‘बाबु तिम्रै पढाइ लेखाइका लागि हामी दुःख गरेर पैसा कमाइरहेका छौं । जाऊ पप्पीसँग खेल । साथीहरूसँग खेल । अहिले तिमीलाई घुमाउन हामीलाई फुर्सद छैन ।’
मौसम यो जवाफले खुसी हुँदैनन् । धेरैबेर घोत्लिन्छन् र भन्छन्, ‘के मैले पैसा दिए भनेचाहिँ मसँग खेल्नुहुन्छ ? पैसा ठूलो कि म ?’
उनले यति गम्भीर कुरा गर्दा पनि आमाबुबाको मन पग्लिँदैन । मालिनी अचम्म मान्दै मनोजलाई हेर्दै भन्छिन् ‘आजकालका केटाकेटी कति चलाख ।’ विद्यालय पनि मौसम निराश देखिन्छन् । एक्लै बस्न मन पराउँछन् । खेल्न पनि खासै रुचि देखाउँदैनन् । साथीहरूसँग बसेर खाजा खाँदैनन् । मिल्ने साथी कुशलले सोध्छन्, ‘मौसम तिमीलाई के भएको छ ? बिरामी छौ ? पेट दुःखेको छ ?’
मौसम धेरैबेर मौन हुन्छन् । आँखाबाट आँसु बर्रर झार्छन् । अनि अवरुद्ध आवाजमा बोल्छन् ‘कुशल, मेरो बाबा र मामु मसँग कुरा गर्नुहुन्न । मलाई कतै घुमाउन पनि लानुहुन्न । तेरै लागि पैसा कमाइरहेका छौं भन्नुहुन्छ । तर मलाई पैसाभन्दा उहाँहरू प्यारो लाग्छ ।’
मौसमको कुरा सुनेर कुशल पनि खेल्न जाँदैनन् । दुवै जनाको अनुहार मलिन देखिन्छ । मौसमको निराश अनुहार देखेर साथी र शिक्षकलाई पनि नराम्रो लाग्छ । कुशलले मौसमको समस्या सबैलाई सुनाइदिन्छन् । रमा मिसले सम्झाउनुहुन्छ, ‘चिन्ता नगर मौसम । म तिम्रो बाबामामुसँग कुरा गर्छु ।’ छुट्टी भएपछि मौसमसँगै रमा मिस पनि उनको घरमा जान्छिन् । मनोज र मालिनी पनि आइपुग्छन् । रमा मिसले मौसमको अवस्थाबारे दुवै जनासँग कुरा गर्न चाहन्छिन् । तर उनीहरूले ध्यान दिँदैनन् । मिसलाई आफ्नो अपमान भएजस्तो लाग्छ । मुहारमा निराशा छाउँछ । उनी मौसमलाई हात हल्लाउँदै बिदा हुन्छिन् ।
मनोज आफ्नो कारलाई सबै चीजभन्दा धेरै माया गर्छन् । फुर्सद पायो कि कार सफा गरेर टल्काउँछन् । उनलाई महँगो सहरमा घर र गाडी जोड्न सकेकोमा गर्वको अनुभव छ । मालिनीले पनि उनलाई सघाइरहेकी छन् । एक दिन मौसम गृहकार्य गरिसकेर खेल्दैखेल्दै कार छेउमा पुग्छन् । उनको हातमा रंगीन पेन्सिल छ । चिल्लो र सफा कार देखेर उनलाई लेखौं लेखौं लाग्छ । केटाकेटी त हो । केरमेट गरिहाल्छन् । त्यहाँ लेख्न पाउँदा उनलाई निक्कै राम्रो काम गरेजस्तो लाग्छ । उनी बुबाआमा छेउ गएर भन्छन्, ‘बाबा मामु, हेर्नुस् न मैले कारमा के लेखेको छु ।’
उनको निर्दोष मुस्कान आमाबुबाको प्रशंसा पाउन आतुर थियो । तर मौसमको हाँसो एकछिनमै चकनाचुर हुन्छ । जब मनोज रिसले आक्रोशित हुन्छन् । छोरालाई पिट्छन् । धित मरुन्जेल गाली गर्छन् । छोराको हातमा पिट्दै भन्छन्, ‘तेरो चकचक गर्ने हात यही होइन ? अब कोर त मेरो कार । तेरो कपी हो मेरो कार ? खेल्ने ठाउँ हो ?’ मौसमको कलिलो मन छियाछिया हुन्छ । हातबाट भलभलती रगत आउँछ । रुँदारुँदै उनी बेहोस हुन्छन् । आमा हस्याङफस्याङ गर्दै आइपुग्छिन् । झकझक्याउँछिन् ‘मौसम, मौसम...।’ धेरै पटक बोलाउँछिन् तर उनी बोल्दैनन् । दुवै आत्तिन्छन् । मौसमलाई अस्पताल पुर्‍याउँछन् । दुवै आत्तिएर डक्टरलाई सोध्छन्, ‘डाक्टरसाब, हाम्रो छोरालाई ठीक त हुन्छ नि ? जसरी पनि ठीक पारिदिनोस्, हामी उसका लागि जति खर्च पनि गर्न तयार छौं ।’
डाक्टरले जवाफ दिन्छन्, ‘हामी कोसिस गर्छौं ।’ धेरै दिन लाग्यो मौसमको उपचार गर्न । हात इन्फेक्सन भएर चल्न नसक्ने भयो । बाबुको गाली र व्यवहारले मानसिक असर पनि परेछ । अब उनी पहिला जस्तो चञ्चल स्वभावका छैनन् । एकोहोरो हेरिरहन्छन्, अनि कम बोल्छन् । धेरै दिनपछि मनोज र मालिनी साथमा अपांगता भएको छोरो लिएर घर फर्कन्छन् । कैयौं दिनदेखि मनोजले कारको स्याहार गर्न पाएका थिएनन् । उनी जागर नलागे पनि कार पुछ्न् पुग्छन् । छोराको उपचारमा धेरै खर्च भइसकेको थियो । मनमनै सोच्छन्, ‘अब त यो कार पनि गुमाउने बेला भइसक्यो ।’ मौसमले लेखेका अक्षर अझसम्म पनि मेटिएका थिएनन् । उनका आँखा त्यता पर्छन् । मौसमले जानी/नजानी लेखेका थिए, ‘म बाबा मामुलाई धेरै माया गर्छु ।’
प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ ०९:४९
चरा देख्दा सबै आनन्दित हुन्छन्  । मन फुरुङ हुन्छ  ।
चिरविराहट र कोकिलकण्ठे बोलीले सबै रमाउँछन् । चराको गतिविधि नजिकबाट नियाल्दा र हेर्दा अझ रोमाञ्चित हुन्छन् । मैले पनि चरालाई नजिकबाट नियाल्न पाएँ । कपिलवस्तु नगरपालिका १ आनन्दवागस्थित मेरो घरमा चमेली फूलको सानो रुखमा श्वेतवक्ष जुरेलीले गुँड लगाउन थालेको थियो । फोटोग्राफीमा हुटहुटी बढेका बेला त्यो देखेर मन चंगा भयो । मनमनै खिच्ने तस्बिरको एंगल बनाए । पछ्याउन थालेँ । दिनहुँ एक/दुई घण्टा लुकामारी चल्न थाल्यो ।
चमेली फूलको रूख साढे दुई मिटर अग्लो थियो । माथिल्लो तलामा उक्लिने सिँढीकै छेउमा डेढ मिटर माथितिर सानो गुँड बनाउँदै थियो । सुकेका घाँसपात, घुर र झिँझाझिँजी मुखमा च्यापेर ल्याउँदै गर्दा मैले देखेँ । ८/१० दिनमा गुँड बन्यो । एक दिन ३ वटा अण्डा देखेँ । त्यसपछि अण्डा बिग्रेला र चरा त्रसित होला भने नजिक गइनँ । सिँढी उक्लँदै कोठा जानुपर्ने हुँदा परैबाट दैनिक चियोचर्चो गर्दै बस्थेँ । एक दिन परैबाट बचेरा चिरबिर गरेको सुनेँ । हेर्न गएँ । खुसी भएँ । बचेरा गुँडमा सुतिरहेका थिए । गुँडको माथि फूलका नयाँ पलाएका पातैपात थिए । फोटो खिच्न निक्कै गाह्रो । माउ पहरा दिएर बस्थ्यो । नजिक गए जोडी नै कराएर आक्रमण गर्न खोज्थे । एक दिन माउ नभएको बेला भेट्टाएँ । माथिका पात हातले चुडेर फालेँ । थोरै सजिलो भयो । तर रुखको मसिना हाँगाबिँगाले गर्दा सोचेजस्तो फोटो खिच्न सकिएन । हाँगाबिँगा काट्दा बचेरा खस्ने डर । त्यही भएर सम्भव भएन् । साँघुरो ठाउँ हुँदा बचेरा र माउको सँगै फोटो खिच्ने अवस्था थिएन । फेरि माउले सधैं बचेरालाई छोपेर राख्थ्यो ।
बचेराको कसरी फोटो खिच्ने भन्ने तनाव भइराखेको थियो । एक दिन जोडी माउ नै आहारा खोज्न गएका थिए । बेचरा सुतिरहेका रहेछन् । फोटो खिच्न उनीहरूलाई उठाउनुपर्थ्यो । कसरी उठाउने भन्ने समस्या भयो । मैले जुक्ति निकालेँ । जुरेलीको जस्तै आवाज निकाले । मेरो आवाजले बचेराले आँआँ गर्दै मुख बाए । सायद ती भोकाएका थिए । फोटो त खिचेँ । तर चारो दिन नसकेकामा दुःखी हुँदै फर्किएँ । माउ जुरेली भने निक्कै चलाख लाग्यो । गुँडबाट परै मान्छे देख्नासाथ उडिहाल्थ्यो । बचेरासँग माउको फोटो खिच्न गाह्रो भयो । एक दिन लुकेर बसे एक घण्टा बढी । माउ आउनासाथ नजिकै क्यामेरा तेर्साएँ । भाग्नै सकेन । गुँडमा बसेको फोटो खिचेँ । एक दिन फेरि बचेरालाई आहार खुवाएको फोटो खिच्ने हुटहुटी चल्यो । अनेकन उपाय गरेर त्यो अवस्था भेटाएँ । तर बचेरा र माउको दूरीे पर हुँदा राम्ररी तस्बिर कैद हुन सकेन । माउको बचेरा स्याहार चलिरहेको थियो । भाले पोथी दुवैले मुखमा च्यापेर नजिकका खेतबारीबाट किराफट्यांग्रा ल्याउँथे । सुरक्षा सर्तकता अपनाउँदै खुवाई फर्कन्थे । ३ वटा बच्चा हुँदा आहार पुर्‍याउन माउलाई हम्मेहम्मे हुन्थ्यो । स्याहारसँगै बचेरा हुर्कंदै गए । दुई सातामा उड्न योग्य हुँदै थिए ।
सतर्कता अपनाई फोटो खिचे पनि मन सन्तुष्ट भएन । फेरि बचेराको फोटो खिच्न मन लाग्यो । फोटो खिच्न जाँदा गुँडमाथिका फूलका पात ठुल्ठूला भएका थिए । खिच्न अप्ठ्यारो भयो । ३ बचेरा उड्न तम्तयार थिए । हातले पात चुडेर फाल्न खोज्दा २ बचेरा उडेर भुँइमा खसे । फोटो खिच्न पनि पाइनँ । तनाव भयो– बचेराले माउको वात्सल्य माया पाउँछ कि पाउँदैन् ? देख्छ कि देख्दैन् ? आधा घण्टापछि माउ आहारा लिएर आए । २ वटा बचेरा नदेखेपछि उनीहरूमा छटपटी भयो । जोडजोडले कराउन थाले । उनीहरूलाई ठूलो सकस भयो । एकछिन पछि भुँइमा चिरबिर गर्दै देखेपछि शान्त बने । जेनतेन उड्न खोज्ने २ वटा बचेरालाई स्याहार गर्न माउलाई सकस पर्‍यो । ३ घण्टा लगाएर उडाएर लिएर गए । एउटा बचेरा भने गुँडमै थियो ।
म रिपोर्टिङका लागि लुम्बिनीतिर गएँ । भुँइका बचेराको स्याहारसुसारमा लाग्दा माउको ध्यान गुडको बचेरामा ध्यानमा परेनछ । त्यति बेलासम्म इहलीला समाप्त भइसकेको थियो । सुनसान देखेपछि धामन सर्पले बचेरालाई आहार बनायो । जुन कुरा म लुम्बिनीबाट फर्किएपछि आमाले भन्नुभयो । आमालाई मैले भने बचाउनुपर्थ्यो नि भनेँ । खाइलादो सर्प थियो, म एक्लैले हिम्मत गर्न सकिनँ भनेर उहाले भन्नुभयो । यो घटनापछि दुःखी बनेँ । बिहान फोटो खिच्न रुखको पात टिप्न नगएको भए २ वटा बचेरा भुँइमा खस्थेनन् । लाग्यो– कतै ती बचेरा पनि सर्पको आहारा बन्थे कि । सकारात्मक सोचेँ, २ वटा बचेराको ज्यान जोगाउन सकेकामा आफूलाई धन्य सम्झे, तराईमा मात्र पाइने यो चरा रैथाने हो । राम्रो आहारविहार पाए यसले एकै सिजनमा दुई पटकसम्म बच्चा कोरल्ने चराविद् डा. हेमसागर बरालले बताए । मार्च अप्रिलमा यसको गुँड लगाउने र बच्चा कोरेल्ने समय हो ।
तस्बिर : मनोज
प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ ०९:४७